Kodzero-dzevanhu, 10 Chikunguru 2019
Chitatu 10 Chikunguru 2019
Britain Yobatsira Paramende Kusimbaradza Mashandiro Ayo
Mutauriri weNational Assembly, Advocate Jacob Mudenda, vazivisa izvi mushure mekutambira gwaro reongoororo yakaitwa neDFID pamusoro pemashandiro emakomiti eparamende kubva kumukuru weDFID muZimbabwe, Amai Catherine Weiss.
VaSikhala Voendeswa kuBikita Kunonzi Ndiko Kwavakaparira Mhosva Yavari Kupomerwa
Vatsigiri veMDC varatidzira muHarare vachiti havasi kufara nekunonoka kuunzwa kumatare kwaitwa mutevedzeri wasachigaro webato ravo, VaJob Sikhala, avo vari kupomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende yaVaEmmerson Mnangagwa.
Hurumende Yopa Masoja Chete Mari yeKubatsirikana Vamwe
Hurumende inonzi yakawedzera mauto mari yekubatsirikana inosvika mazana mana emadhora emaRTGS apo vakatambira nezuro kunyangwe hazvo vamwe vashandi vose vehurumende vasiri kupihwa mari iyi.
Dambudziko reMagwaro eKufambisa Rokanganisa Vari Kunze kweNyika
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kutyorerwa kodzero dzazvo nekukundikana kwehurumende kuzviwanisa magwaro ekufambisa kana kuti masipoti nenguva inokodzera uye inotarisirwa nemunhu kuti ange awana gwaro rake.
Hurumende Irikugadzira Mitemo Ichashandiswa Nemakereke Ose
Hurumende inoti iri kunyora mitemo inofanirwa kutevedzwa nevemakereke mukuita basa ravo, ichiti vamwe vanhu varikushandisa makereke kutyora mitemo yenyika uye kuita zvisakafanira, zvinosanganisa kubudisa nekupinza mari munyika zvisiri pamutemo.